အရပ်မြင့်ဖို့ထက် စတိုင်မိဖို့ ဒေါက်စီးရမှာပဲလေနော်. ဆိုလာတဲ့ မိုးစက်ဝိုင် - Zeekwat Hot News
အရပ်မြင့်ဖို့ထက် စတိုင်မိဖို့ ဒေါက်စီးရမှာပဲလေနော်. ဆိုလာတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်
August 10, 20190129
မိုးစက်ဝိုင် လို့ပြောတာနဲ့ အရပ်ရှိရှိနဲ့ မြင်သူတကာငေးမောရလောက် ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထား အလှမယ်ဆိုတာ ပရိသတ် ကြီး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည် ကျင်းပတဲ့ Miss Universe Myanmar 2013 ရွေးချယ်မှာ မိုးစက်ဝိုင်ဟာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အနုပညာမျိုးရိုးမရှိခဲ့တဲ့ သူမဟာ ယခင်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆက်တိုက် ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo – Ria Bo Vich
သူမဟာ အခုဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ မိုးစက် ဆိုတဲ့ ချစ်စနိုးနဲ့ နာမည်လေး အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဆိုရင် အကယ်ဒမီနေတိုး၊ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော် ရွှေထူးတို့နှင့်အတူ ပက်ပက် စက်စက်ညို့ ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမက ရုပ်ရည်ချောမော သလောက် ပရဟိလုပ်ငန်းတွေမှာလဲ ယဉ်ကျေးမူအမွေနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ တွေမှာပါ ပါဝင်ကူညီလေ့ရှိပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိထားတဲ့ သူမက အနုပညာအလုပ်ေ တွ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပြည်ပကို ခရီးသွားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
လတ်တလောမှာ သူမက ဒေါက်စီးတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ယခုလို “ တွေးရင်းဆွေးရင်းငေးရင်း… မိုးစက်ဝတ်ထားတာ ၃လက်မဒေါက်ပါ.. ဒေါက်ဝတ်တဲ့အခါ လမ်းလျောက်နိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်. မိုးစက်က ဒေါက်စီးလေ့မရှိေ တာ့ အရမ်းမြင့်ရင်မလျောက်နိုင်ပါဘူး. မိုးစက်တို့လို ပိန်ရှည်လေးတွေ စကပ်အတိုဝတ်မယ်ဆို ဘောင်းဘီအတိုအကပ် တထပ်ခံပြီးဝတ်ပါ. အရှည်တော့မကွာစေနဲ့ပေါ့ ဖိနပ်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒေါက်ချွန်ချွန်နဲ့ ကိုယ်လျှောက်နိုင်တဲ့ ဖိနပ်ကလေး ကိုရွေးပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်.
၄ လက်မဒေါက်နဲ့ ၅ လက်မဒေါက်စီးနိုင်ရင်တော့ ရှဲပဲ. ရာထူးတက်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်. ဒါနဲ့ မိုးစက်အရပ်က ၅ ပေ၁၀ ဆိုတော့ ၃လက်မဒေါက်နု့ဆို ၆ ပေ ၁ ကိုရောက်နေပါပြီ. ဒါပေမဲ့ မြင့်ဖို့ထက် စတိုင်မိဖို့ ဝတ်ရမှာပဲလေနော်. အရပ်ရှည် ပြီး ဒေါက် မဝတ်ရဲသူတွေ ဝတ်ကြတော့နော်. ပြီးရင်ပုံလေးတွေပြပေး. ချစ်တဲ့ မိုးစက် 😘” ဆိုပြီး အရပ်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကို အားပေးထားပါတယ်။
မြတ်မေတ္တာမွန် ကံထူးရှင်ချယ်ပွဲကို တတ်ရောက်ခဲ့ပုံတွေနဲ့အတူ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး ကျက်သရေရှိရှိ တည်ငြိမ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ အရမ်းလှနေတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ကို ဘယ်လိုနေလဲ တစ်ခုခုတော့ ပြောခဲ့ပါအုံးနော်။ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံစား နိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော် .….……။
Source Moe Set Wine
အရပျမွငျ့ဖို့ထကျ စတိုငျမိဖို့ ဒေါကျစီးတယျလို့ရမှာပဲလနေျော. ဆိုလာတဲ့ မိုးစကျဝိုငျ
မိုးစကျဝိုငျ လို့ပွောတာနဲ့ အရပျရှိရှိနဲ့ မွငျသူတကာငေးမောရလောကျ ရုပျရညျကိုပိုငျဆိုငျထား အလှမယျဆိုတာ ပရိသတျ ကွီး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောအတှငျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ပွနျလညျ ကငျြးပတဲ့ Miss Universe Myanmar 2013 ရှေးခယျြမှာ မိုးစကျဝိုငျဟာ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပါတယျ။ အနုပညာမြိုးရိုးမရှိခဲ့တဲ့ သူမဟာ ယခငျဆိုရငျ ပရိသတျတှရေဲ့ ဆကျတိုကျ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ အခုဆိုရငျ ပရိသတျတှေ ကွားမှာ မိုးစကျ ဆိုတဲ့ ခဈြစနိုးနဲ့ နာမညျလေး အောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျ တဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဆိုရငျ အကယျဒမီနတေိုး၊ သရုပျဆောငျအဆိုတျော ရှထေူးတို့နှငျ့အတူ ပကျပကျ စကျစကျညို့ ဇာတျကားမှာပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ သူမက ရုပျရညျခြောမော သလောကျ ပရဟိလုပျငနျးတှမှောလဲ ယဉျကြေးမူအမှနှေဈ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေး အဖှဲ့တှမှောပါ ပါဝငျကူညီလရှေိ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူမက အနုပညာအလုပျတှေ လုပျကိုငျလကျြရှိပွီး တဈခါတဈရံမှာ ပွညျပကို ခရီးသှားတာတှေ တှရေ့ပါတယျ။ လတျတလောမှာ သူမက ဒေါကျစီးတာနဲ့ ပကျသကျပွီး ယခုလို “ တှေးရငျးဆှေးရငျးငေးရငျး… မိုးစကျဝတျထားတာ ၃လကျမဒေါကျပါ.. ဒေါကျဝတျတဲ့အခါ လမျးလြောကျနိုငျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ. မိုးစကျက ဒေါကျစီးလမေ့ရှိတော့ အရမျးမွငျ့ရငျမလြောကျနိုငျပါဘူး.
မိုးစကျတို့လို ပိနျရှညျလေးတှေ စကပျအတိုဝတျမယျဆို ဘောငျးဘီအတိုအကပျ တထပျခံပွီးဝတျပါ. အရှညျတော့မကှာစနေဲ့ပေါ့
ဖိနပျရှေးမယျဆိုရငျဒေါကျခြှနျခြှနျနဲ့ ကိုယျလြှောကျနိုငျတဲ့ ဖိနပျကလေးကိုရှေးပါလို့ အကွံပွုခငျြပါတယျနျော. ၄ လကျမဒေါကျနဲ့ ၅ လကျမဒေါကျစီးနိုငျရငျတော့ ရှဲပဲ. ရာထူးတကျအောငျလကေ့ငျြ့ရမယျ. ဒါနဲ့ မိုးစကျအရပျက ၅ ပေ၁၀ ဆိုတော့ ၃လကျမဒေါကျနု့ဆို ၆ ပေ ၁ ကိုရောကျနပေါပွီ. ဒါပမေဲ့ မွငျ့ဖို့ထကျ စတိုငျမိဖို့ ဝတျရမှာပဲလနေျော.
အရပျရှညျပွီး ဒေါကျ မဝတျရဲသူတှေ ဝတျကွတော့နျော. ပွီးရငျပုံလေးတှပွေပေး. ခဈြတဲ့ မိုးစကျ 😘” ဆိုပွီး အရပျရှညျတဲ့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှကေို အားပေးထားပါတယျ။ မွတျမတ်ေတာမှနျ ကံထူးရှငျခယျြပှဲကို တတျရောကျခဲ့ပုံတှနေဲ့အတူ တငျထားတာ တှရေ့ပါတယျနျော။ ခဈြစရာကောငျးပွီး ကကျြသရရှေိရှိ တညျငွိမျမှုတှေ အပွညျ့နဲ့ အရမျးလှနတေဲ့ မိုးစကျဝိုငျကို ဘယျလိုနလေဲ တဈခုခုတော့ ပွောခဲ့ပါအုံးနျော။ အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစား နိုငျအောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လုပျထားဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော .….……။
ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြိုက်သူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ Angel’s Last Mission:Love အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
မြ၀တီသွားရင်း ဘားအံရေးဘေးအတွက် ၀င်ရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း